अन्तरवार्ता - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
शरीरमा रहेका सेल्स (कोषको) वृद्धि हुने निश्चित दायरा हुन्छ । शरीरका कोषले कस्तो आकार लिने र कतिसम्म वृद्धि हुने भन्ने पनि निश्चित नै हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ कोष अनियन्त्रित...
खेलकुद जीवनको अभिन्न अंग जस्तै हो । स्वस्थ जीवनका लागि खेलकुदको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । खेलले समाजमा विभिन्न द्धन्द्धहरु अन्त्य गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । पेलेले फुट...
सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका महिलाहरु पाठेघर खस्ने समस्या विकराल बन्दैछन् । सुदूरपश्चिमको भौगोलिक विकटता, सानै उमेरमा विवाह हुने, जन्मान्तर कम हुने, सुत्केरी अवस्थामा आराम नपुग्ने, गाह्रो काम ग...
आफ्नो पहिलाे उपन्यास 'मुदिर'मार्फत वैदेशिक राेजगारीकाे कथा लेखेर चर्चा बटुलेका आख्यानकार मीनराज बसन्त अढाई वर्ष पश्चात आफ्नो दोस्रो उपन्यास 'पिपिरी' लिएर पाठकमाझ आए । मिति २०७५ फागुन १८ गते शनिबारका द...
शान्ति सुरक्षादेखि महिला हिंसा, बलात्कार तथा गाउँपालिकामा बैंकको शाखा विस्तार गर्नेसम्मको विषयमा सांसद र मन्त्रीबीच संसद्मा पहिलोपटक मौखिक प्रश्नोत्तर भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्मा बुधब...
कास्कीको कालिकामा २०२६ सालमा जन्मिएका बहिङगमराज तिमिल्सीना नेपालमा दश महाविद्याका एक साधक हुन । जुन दश महाविद्याका साधक यसअघि योगी नरहरीनाथ र धन शमसेर मात्र थिए । सानैदेखि भारतको बनारस बसेर तपस्या गर...
पार्टीको बैठक बोलाउने, पटकपटक स्थगित गर्ने र बैठक बस्ने दिन पनि पर्खाएर अपमान गर्ने परम्परा बसेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का चार शीर्ष नेताले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेका छन् । प...
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच मुनमुटाव छ । अधिकार सम्बन्धमा देखिएको अघि बढ्ने र छेक्ने रणनीतिमा अघि बढेको छ । विषेशगरि प्रदेश नम्बर २ सरकारसँग झन धेरै कुरा मिलेको छैन । प्रहरी ऐनलाई स्थगन गरेको प्रद...
आफूसँग अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाउने तयारीमा लागेका छन् । त्यही तयारीमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई...
स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपाएको भन्दै संघिय सरकार प्रति गुनासो गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । अहिले कर्मचारी समायोजनका लागि नयाँ ऐन २०७४ ल्याउने तयारी सरकारले थालेको ...
दशै कसरी सुरु भयो ? कसले कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्ने विषयमा दशैसँगै बहस सुरु हुन्छ । सरकारले यसअघि दिने १५ दिनको विदा कटौती गरेर ४ दिनमा आइपुगेकोबाट पनि दशैको महत्व कमजोर बन्दै गएको छ । अहिले दशैलाई ...
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ३ महिना वितिसकेपनि अपराधी पत्ता लागेको छैन । निर्मलापन्तको घटनामा कञ्चनपुर प्रकरणमा निलम्बित एसपी डील्लीराज विष्ट निलम्बनमा परेका छन् । घटनासँग पनि उनका छोरालाई ज...
वामदेव गौतमका लागि पद छाड्न तयार भएपछि अहिले काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धर चर्चामा छन् । पार्टीलाई राजीनामा बुझाएर उनी दुःखी होइन, बरु खुसी सारिरहेका छन् । पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग सोमबार छलफल गरे...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिले विवाद छ । शीर्षतहका नेतादेखि दोस्रोतहका नेताहरु पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । माधवकुमार नेपालले संसदमा सरकार विरुद्ध र चियापान गरेर पार्टी नेतृत्व व...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिले विवाद छ । शीर्षतहका नेतादेखि दोस्रोतहका नेताहरु पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । माधवकुमार नेपालले संसदमा सरकार विरुद्ध र चियापान गरेर पार्टी नेतृत्व वि...
प्रदेश १ र २ सरकारको मुख ताकेर बसेपनि प्रदेश ७ सभाले भने नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा आफैँले सक्रियता देखाएको छ । नाम र राजधानीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गराउने सोच प्रदेश सभाको छ । संसदीय विशेष समि...
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोकेपनि अन्य प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेश सभामा विषय प्रदेश समेत गराएका छैनन् । प्रदेश ३, ५ र ७ ले नाम र स्थायी राजधानी अध्ययनका लागि संसदीय समिति बनाएर काम...
के नेपाललाई सोमालिया बनाउन खोजेको हो ?
म्यानपावर व्यवसाय संचालनका लागि धरौटी रकम बढाउने सरकारी तयारी पछि सरकार र व्यवसायीबीच दूरी बढेको छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी रुपमा नियम बनाउन लागेको व्यवसायीको आरोप छ । यसै विष...